Ikala - Wikipedia
Ity lahatsoratra ity dia voasokajy ho anisany lahatsoratra manana fomba fijery mitongilana loatra, ka tokony ahitsy ary atao mifanaraka amin'ny fototra dimy mifehy an'i Wikipedia.
Misaotra amin'ny fandraisanao anjara.
Ikala dia ny anaram-bositra entin'i Helisoa Rabezato amin'ny maha artista malagasy azy. Tamin'ny taona 1966 izy no teraka, tao Antananarivo. Mpamorona sy mpanamboatra kanto izy, ka miopàna indrindra amin'ny art plastique ny sagan'asany. Mpandravaka matianina (décoratrice professionnelle) koa Ikala. Mamorona sy manoratra tonokalo koa izy. Ikala dia voa-isa an'isan'ny mpanankato misoratra ao amin'ny Ministeran'ny Kolon-tsaina Malagasy. Eto Antananarivo no monina Ikala ary mandray anjara amin'ny fitaizana ara-panahy ireo zatovo izay manantona azy. Satria Ikala dia anisan'ireo mpanakanto mahatsàpa fa manana adidy amin'ny fitaizàna ara-panahy ny manodidona azy. Mba nahafahany manao izany fampintàna "fahazavàna" izany dia nanao fikarohana manokana izy ary nanao safidy hitondra ny fiainany ivelan'ny andavan'andro mahazatra amin'ny fiainana moderna. 15 taona no niainan'Ikala tao anaty fiainan'artista.
Fa inona moa no tena nahantonga ity anaram-bosotra hoe Ikala ? Tsotra ihany. Safidîn'i Helisoa R. ity anaram -bosotra ity, izay nomen'ny namany akaiky ka lasa raikitra satria mamehy ny atao hoe vehivavy malagasy, ary koa ho fahatsiaronavana ireo namana izay niara-dia taminy.
Efa nitety firenena vitsivitsy tany andafin'ny riaka Ikala, nampiranty ny sagan'asany ary koa nampiranty ny harena voajanaharin'i Madagasikara, izay akora tena ampiasainy amin'ny famoahàna ny ainga-panahiny.
Raha atao ny famaritana dia ny fanomezam-boninahitra ny natiora, ny fihavanana, ny fifankatiavana sy ny fahazavàna (lumière de l'âme) no angovo entin'Ikala mamorona ireo sagan'asany. Izanynrahateo no hafatra entin'ireôsagan'asa ireo.
Ikala dia anisan'ireo artista nanàja ny lalàna mifehy ny kanto (ethique des artistes) ka na teo aza ny romoromon'ny andavan'andro, sy ny fahasahiranana samihafa, dia nandà hivarotra ny kanto ivelan'ny sehatra tokony hanaovana izany.
Ankehitriny, (septembre 2015) dia monina any atsimon'i Frantsa i Ikala. Mbola mandrato fianarana izy na dia efa tonga amin'ny takariva aza ny taonany. Izany dia nohon'ny faniriana hameno ny fahalàlany mba ahafahany mameno ireo soa tokony ahely amin'ny mpiara-belona, indrindra fa ny tanora malagasy.
Olompirenena mavitrika i Ikala, na dia tsy anisan'ireo izay atao hoe manao politika aza. Satria tsy miandàny amin'ireo mpanao politikam-pitondrana i Ikala, fa kosa, miezaka manana ny politikan'olombelona. Ny antsoiny hoe "politik'olombelona", dia tsy inona akory fa ny fanaparihàna ny fahazàvana sy ny fitiavana izay maharesy ny maizina indrindra.
Malagasy rà, sy Malagasy nofo i Ikala, ary Malagasy fanahy indrindra indrindra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikala&oldid=773146"
Voaova farany tamin'ny 27 Septambra 2015 amin'ny 11:02 ity pejy ity.